ममा हजारभन्दा लाखको लोभ छ
२०७५ भदौ २३ शनिबार ०९:०२:००
— बद्री अधिकारी
हिन्दी सिनेमाले बद्री अधिकारीमा अभिनयतर्फ लाग्ने रुचि जागृत गराए । विराटनगरका बद्री त्यसबेला प्रदर्शनमा आएका श्यामश्वेत र रंगीन हिन्दी सिनेमा हेर्न हलमा खुबै जान्थे । यसरी सिनेमाबाट प्रभावित बद्रीको रुचिलाई मलजल गरे— स्कुलमा हुने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूले । ९ कक्षामा पढ्दा प्रहसनबाट रंगकर्म थाले । उमेर उक्लिँदै गएपछि उनलाई लाग्यो— प्रहशन होइन, रंगमञ्चमा गम्भीर काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि उनी नाटकतर्फ सक्रिय भए । तर, अचेल उनी नाटकभन्दा सानो पर्दा र ठूलो पर्दाका चलचित्रमा व्यस्त छन् । जबकि, कुनै बेला उनको व्यस्तता नाट्य क्षेत्रमा मात्रै थियो । ३० को दशक प्रारम्भदेखि नाट्यकर्ममा लागेका बद्रीले अभिनयमात्रै गरेनन्, नाटक लेखन तथा निर्देशन पनि गरे । यतिबेला ‘मानव’ टेलिफिल्मको सम्पादनमा व्यस्त बद्रीसँग उनको नाट्यकर्मलाई लिएर ‘बाह्रखरी’का राजेश खनालले लामो कुराकानी गरेका छन्ः
तपाईंले केही थाहा नभएरै नाटक गर्न शुरु गर्नुभएको हो ?
हो । नाटकका विषयमा केही थाहै थिएन । जसोतसो गरिन्थ्यो । किनभने, नाटक कस्तो हुन्छ, कसरी लेखिन्छ, कसरी त्यसको निर्देशन गरिन्छ, आफूले गरेको नाटक अब्बल छ कि छैन— यी सारा विषयको यथार्थ निर्णय गरिदिएर हामीलाई सिकाइदिने मानिसै थिएनन् । हामी त अनुमानको भरमै नाटकमा सक्रिय भएका थियौं । जे जति जान्यौं, आफ्नै बुता र मेहनेतले जान्यौं ।
लामो समय रंगमञ्चका लागि खर्चनुभयो । अचेलचाहिँ रंगमञ्चमा त्यति देखिनुहुन्न । किन ?
हैन, कुनै न कुनै रूपमा म रंगमञ्चसित जोडिएकै छु । मात्रै यति हो कि अहिलेको समयअनुसार केही समय चलचित्रमा दिएको हुँ । वास्तवमा मजस्तो सर्जकले आफ्नो सिर्जना एक हजारले भन्दा एक लाखले हेरून् भन्ने चाहन्छ । ममा पनि त्यही लोभ हो । हजार भन्दा लाखको काखमा जाने प्रयास हो मेरो । यो खास किसिमको लोभ त्याग्न सकेको छैन ।
उसो भए रंगकर्मसँगको दूरी बढेकै हो ?
मैले भनें नि, अलि ग्याप भएको हो । तर, रंगकर्ममा मेरो सक्रियता उस्तै छ । त्यसको उदाहरण के हो भने, अहिले म ‘मानव’ टेलिफिल्ममा काम गरिरहेको छु । त्यसमा पनि रंगकलालाई सानो पर्दामा प्रस्तुत गरिरहेको छु । रंगमञ्चकै क्यानभासलाई पर्दामा उतार्ने प्रयासमा छु । अहिले पनि स्टेज सम्झिएर मैले टेलिफिल्म र फिचर फिल्म निर्देशन गरिरहेको छु । बस्— टेलिभिजनमा हेर्ने दर्शक धेरै हुन्छन्, त्यत्ति हो । मलाई लाग्छ— मैले मञ्चमा नै काम गरिरहेको छु ।
तर पनि बद्री अधिकारी यतिबेला रंगमञ्चमा सक्रिय छैनन् भन्ने त देखिन्छ नि ! तपाईंले स्टेजमा काम गरिहनुभएको पनि त छैन !
यो नै यथार्थ भने होइन । मलाई लाग्छ— बितेका ४३–४४ वर्षदेखि म रंगकर्ममै छु । विभिन्न कारणले कहिलेकाहीँ ग्याप भइहाल्छ । कहिलेकाहीँ तीन–चार वर्षको नै ग्याप भयो होला । तर, यसो भन्दैमा बद्री अधिकारीले स्टेज छोड्यो भन्न सकिन्न । विदेशतिर अभिनय गर्नेले नै पनि चार–पाँच वर्षमा एउटा फिल्ममात्रै गरिरहेको पनि त पाइन्छ नि ! ग्याप हुँदा पनि कुनै न कुनै काममा हात हालिरहन्थें म । ०६२–६३ को जनआन्दोलनताका गुरुकुलमा भेला भएको बेला एकल अभिनय गरेको थिएँ । ‘लोकतन्त्र’ शीर्षकको एकल प्रस्तुति थियो त्यो । त्यसमा १०–१५ जनाको चरित्र म एक्लैले गरेको थिएँ । केही समयअघि मात्रै पनि ‘महर्षि याज्ञवल्क्य’ नाटक मञ्चन गरेको थिएँ, नाचघरमा ।
यो बीचमा तपाईं अलि सुस्त देखिनुमा कतै गुरुकुल र आरोहण नभएको कारण त होइन ?
त्यसो पनि हुन सक्छ । म यसलाई सिधै नकार्दिनँ । साथीहरू वसन्त, समन्त, सूर्यमालाहरू रंगमञ्चमै सक्रिय भइरहेको भए म पनि त्यता सक्रिय हुन्थें कि ! कसैले नाटक गर्ने आग्रह गर्दा आरोहण वा गुरुकुलमा गइन्थ्यो होला । तर, कोही पनि नभएपछि कसैले बोलाएनन् पनि । आफू पनि लागिएन । आज म मिडियामा बोल्दै छु, अब मैले रंगकर्ममा समय दिनेछु । नाटकहरू गर्नेछु । यो मेरो बचन भयो । त्यसो त यो बीचमा मैले चलचित्र र टेलीसिरियल गरिरहेको छु । केही समय लिन्छ त्यसले । त्यसपछिको समय ‘महर्षि याज्ञवल्क्य’ र ‘अमरसिंह’का लागि दिनेछु ।
४० को दशकलाई नाट्य क्षेत्रमा स्वर्ण युग मानिन्छ । त्यो युगको अभिनेता, लेखक, निर्देशक हो तपार्इं । तपाईहरूको नाट्य सक्रियतामा आएको ह्रासले अहिलेको नाट्यकर्मलाई पनि त असर पार्ला नि !
केही हदसम्म पार्न सक्छ किनभने नयाँ पिँढीलाई हामीले ऊ बेला गरेका काम तथा हाम्रो प्रस्तुतिका बारेमा थाहा हुँदैन । तिनले हाम्रो नाम मात्रै सुनेका हुन सक्छन् । त्यो समयमा कस्ता नाटक हुन्थे, कसरी हुन्थे, तत्कालीन परिस्थितिमा हामीले नाटक गर्दा के–कस्ता समस्या भोग्नुपरेको थियो, यी यावत् कुरा तिनले सोचेका हुँदैनन् पनि । तर, नयाँ पिँढीले त्यो पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नयाँलाई त लाग्न सक्छ— पुरानाले अशक्त भएर काम छाडे वा पलायन भए । तर, त्यसो होइन । केही नाट्यकर्मी अहिले पनि सक्रिय छन् । हो, त्यसबेलाका ५०–६० जनाको रंगकर्मीहरूको समूहमा अहिले सक्रिय भनेका तीन–चार जनामात्रै होलान् । यसरी ‘काउन्ट’ गर्दा मेरो पनि गणना हुन्छ । म खुशी छु । तर, यो खुशीले मात्रै पनि काम गर्दैन ।
त्यसैको परिणाम हो नाटक ‘महर्षि याज्ञवल्क्य’ ?
निश्चय पनि । मैले करिब वर्ष दिनअघि वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी दाइको नाटक ‘महर्षि याज्ञवल्क्य’को निर्देशन जिम्मा लिएको थिएँ । त्यसबेला मलाई सांस्कृतिक संस्थानबाट बोलाइएको थियो यो नाटक निर्देशन गर्नका लागि । म बहुत खुशी पनि भएँ । मलाई सम्झेर बोलाउनुभयो । त्यसमाथि सत्यमोहन दाइको नाटक गर्न पाउनु मेरा लागि आफैंमा महत्वपूर्ण काम थियो । यो नाटकको रिहर्सल करिब साढे तीन महिना लगाएर पूरा गरें । कति कलाकार त बीचमै भागे पनि । इच्छाशक्ति बलियो भएकाहरू मात्रै यस नाटकमा थिए ।
वास्तवमा सत्यमोहन दाइको यो नाटक निकै लामो थियो । मैले सत्यमोहन दाइसँग नाटक छोट्याउने अनुमति लिएँ, त्यसको मर्म नमर्ने गरी प्रस्तुत गर्ने शर्तमा । उहाँले पनि हुन्छ भन्नुभयो । उहाँले नै भन्नुभयो, “नाटक भनेको निर्देशकको माध्यम हो । त्यसैले नाटकलाई काँटछाँट गर्न सक्नुहुन्छ । मेरा लागि नाटकको मञ्चीय प्रस्तुतिले नाटकलाई सार्थक तुल्याउँछ ।” सत्यमोहन दाइको यो भनाइले मलाई अत्यधिक प्रेरणा दियो र मैले नाटकमा केही परिमार्जन गरेर यसको रिहर्सल थालें ।
यति मेहनत गरेको यो नाटक जम्मा दुई दिनमात्रै प्रदर्शन भयो । किन ?
हो । दुःखद कुरो के भयो भने नाटकको तेस्रो दिन नै यसका प्रमुख कलाकार अभिनेता विष्णुभक्त फुयाँलको स्टेजमै निधन भयो । त्यसपछि यो नाटक केही दिनलाई बन्द गरियो । त्यसपछि नाटक मञ्चनै भएन ।
अब फेरि नगर्ने यो नाटक ? महिनौंको मेहनत खेर गएन र ?
यो तयार नाटक हो । फेरि मञ्चन गर्न सक्ने अवस्था यथावत् छ । तत्कालीन अवस्थामा स्थिति नै त्यस्तै भयो । सबै स्तब्ध थिए । त्यसैले बन्द गरिएको थियो । अब भने मैले सांस्कृतिक संस्थानका जीएम राजेश थापाजीसँग यस विषयमा कुरा गर्छु । किनभने त्यसमा मैले मात्रै होइन, कलाकारहरूले पनि अत्यधिक मेहनत गरेका थिए । भाइबहिनीहरूको अभिनय पनि उत्साहप्रद थियो । पुरानो कालखण्डको नाटकलाई अहिलेको समयानुसार प्रस्तुत गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण कार्य पनि थियो ।
नौटंकी शैलीमा प्रस्तुत भएको थियो नाटक, हैन ?
हो । यसमा नौटंकी शैली प्रयोग गरेको थिएँ । नौटंकी शैलीमा जनकपुरतिर कसैले नाटक गरको भए म भन्न सक्दिनँ । मैले काठमाडौंमा त्यो शैलीमै यो नाटक प्रस्तुत गरें । बीचमा गीत पनि राखें । हार्मोनियम र ढोलक प्रयोग गर्दै लाइभ गीत–संगीतका माध्यमबाट दृश्य परिवर्तन गराउने र जानकारी दिने सूत्रधार प्रयोग गरें । तराईतिर मेला (जात्रा)हरूमा कपडाको घोडा कुदाउने प्रचलन छ । मैले नाटकमा त्यसको पनि प्रयोग गरें ।
कत्तिको गाह्रो भयो ?
गाह्रो हुन्थ्यो होला तर नाचघरबाटै यो नाटक भइरहेकोले सजिलो के भइदियो भने वाद्यवादन र वाद्यवादक पनि त्यहीँ थिए । गायक–गायिका पनि त्यहीँ थिए । नृत्य गर्ने कलाकार पनि त्यहीँ थिए । त्यसैले मैले यो नाटकलाई अलिक पृथक रूपका साथ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्ने अवसर पनि पाएँ ।
तर, मजस्ता धेरै दर्शकले त्यो नाटक हेर्न पाएनन् ।
तपाईंले झक्झकाउनु भयो मलाई । के गर्ने, त्यसबेलाको अवस्था नै त्यस्तै थियो । मलाई लाग्छ– अब मैले फेरि पनि राजेश थापाजीसँग कुरा गर्नुपर्छ । ढुक्क हुनुस्, अब दर्शकहरूले ‘महर्षि याज्ञवल्क्य’ हेर्न पाउनुहुन्छ ।
त्यसपछि के गर्ने सोच्नुभएको छ ?
म नाट्यकर्मप्रति गम्भीर छु । म वरिष्ठ नाटककार बालकृष्ण समद्वारा लिखित ‘अमरसिंह’ नाटक मञ्चन गर्ने तयारीमा पनि छु । केही समयअघि मनमैजू सांस्कृतिक समूहका साथीहरूले नाटक ‘अमरसिंह’को निर्देशन गरिदिन भन्नुभएको थियो । कसैले मेरो नाम लिएका रहेछन् । मेरा लागि ‘अमरसिंह’ नाटकको निर्देशन गर्न पाउनु भनेको गर्वको विषय हो ।
समजीका नाटकमा पनि त केही परिवर्तन गरिएलान् नि ?
बालकृष्ण समका नाटकले इतिहास र दर्शन बोकेका हुन्छन् । त्यसैले उहाँका नाटक गर्न कठिन छ । त्यो नाटकलाई आजको वातावरण र समयसुहाउँदो प्रस्तुतिमा त निर्देशकले नै ढाल्ने हो । मेरा लागि यो पनि चुनौतीपूर्ण कार्य हो । त्यसैले पनि मैले यो काम स्वीकार गरेको हुँ । यसका लागि आर्मीसँग सामानहरू माग्नुपर्ला । सांस्कृतिक संस्थानले पनि सहयोग गर्छ होला । अरूले पनि आवश्यक सहयोग गर्ने नै छन् किनभने ‘अमरसिंह’को क्यानभास नै ठूलो छ । अर्को कुरा— मैले यो नाटक कहाँ मञ्चन गर्छु भन्ने विषयलाई पनि गोप्य राखेको छु । यसको खुलासा पछिमात्रै हुनेछ । किनभने, यो मेरो सिर्जनासँग गाँसिएको विषय हो ।
पुराना रंगकर्मीहरू किन हराएका होलान् ?
एक समयका सक्रिय रंगकर्मी यसरी हराउनु ठीक होइन । रंगकर्मीहरू रंगकर्ममा नलाग्नु भनेको बेइमानी हो । नाट्यकर्मीहरूले पनि आफ्नो आस्थालाई जीवित राख्नुपर्ने हो ।
नेपाली नाटकको अभावका विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
नाटकको अभाव मैले पनि भोगेको छु । आज विजय मल्ल वा बालकृष्ण समका नाटक गरिँदैनन् । त्यसैले नाटक लेखनमा कलम चलाउने व्यक्तिलाई अगाडि ल्याउनु जरुरी देखिएको छ ।
तपाईंले ३५ वर्षअघि लेखेको ‘प्रतिभा आकाश माग्छे’, ‘अनि यसकारण रिसाउँछ कुमार’, ‘मान्छेभित्रको मान्छे’, ‘भीडमा हराएको मान्छे’हरू पनि त मञ्चन गर्न सकिन्छ होला नि अहिले !
त्यसबेला मैले १७–१८ वटा नाटक लेखें हुँला । त्यसबेला उल्लिखित नाटकहरूले तत्कालीन समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्थे । ती नाटक त्यसै बेलाका लागि लेखिएका थिए । तथापि अहिले पनि ती नाटक मञ्चन हुन सक्छन् । बस्, त्यसका लागि निर्देशकले मेहनत धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा के भने— नाटकका दुइटा पाटा हुन्छन् । एउटा साहित्य र अर्को मञ्चीय । मञ्चमा प्रस्तुत गर्न योग्य छैन भनेर साहित्यले भरिएको नाटकलाई पन्छाउनु ठीक होइन । त्यसका लागि निर्देशकले मेहनत गर्नैपर्र्छ । हामीले उहिले नाटक लेख्दा साहित्यमा बढी जोड दियौं । अनि मञ्चमा निर्देशकीय क्षमता प्रस्तुत ग¥यौं ।
ती नाटकका किताब छन् त ?
मेरा धेरै नाटक हराए । नाटक गर्नुपर्छ, छपाउनु हुन्न भन्ने मानसिकताले पनि नाटकको किताब छाप्नेतिर खासै ध्यान दिइएन । ती नाटक किताबमा आएका भए अहिलेका रंगकर्मीहरूले पनि मञ्चन गर्ने थिए होलान् । अब म मेरा पुराना नाटक खोज्नतर्फ पनि लाग्छु । भेटिए त्यसको प्रकाशन गर्नेतर्फ पनि मेरो जोड रहनेछ ।